» हेटौंडा आईडलको टप टेनमा को–को परे ?
हेटौंडा आईडलको टप टेनमा को–को परे ?
२०७५ फाल्गुन २५,शनिबार १४:४३
मकवानपुर २५ फागुन । हेटौंडा औद्योगिक मेलामा संचालन भईरहेको गायन प्रतियोगिता हेटौंडा आईडलबाट आज २ जना बाहिरिएका छन् । शुक्रबार उत्कृष्ट १२ जना छनौट गरेको हेटौंडा आईडलले आज उत्कृष्ट १० जनालाई मात्रै छनौट गरेको हो ।
आयोजकका अनुसार आज कोड नम्बर ५ का कविर गौतम र कोडनम्बर १३ का रामकुमार गोले रहेका छन् । आइडलको टप टेनमा आशुतोश पोखरेल १, विनायक विडारी २, सुविन विश्वकर्मा ४, सुसन शाह ठकुरी ७, प्रेम बैठा ९, विजय लामा १०, सुसाल तामाङ ११, दीपक कालिराज १२, भुवन घलान १४ र पारु महरा १५ पर्न सफल भएका छन् ।
जिपिएक्स रेसिङले प्रायोजन गरेको आइडलमा आजको सिङगर अफ द डे सुसाल तामाङ भएका छन् । उनले बोन ट्राभल्सको तर्फबाट काठमाडौं पोखरा आउने जाने टिकटको व्यवस्था, आई ए वि ए ट्रेडर्सको तर्फबाट, दाजुभाई फास्ट फुड र एलएन फ्रेस जुसको तर्फबाट आर्कषण पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।